ဒုက္ခသည်များနေရန်ပြန်ခြင်း မြန်မာစတင်ရေး တရုတ်က တက်ကြွသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်းဆို။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ မဟာဗျူဟာ မြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ် ပူးပေါင်းမှု အမြင့်ဆုံး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် တရုတ်ဆန္ဒရှိဟု ဆို – H2Oupdatenews
ဒုက္ခသည်များနေရန်ပြန်ခြင်း မြန်မာစတင်ရေး တရုတ်က တက်ကြွသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်းဆို။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ မဟာဗျူဟာ မြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ် ပူးပေါင်းမှု အမြင့်ဆုံး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် တရုတ်ဆန္ဒရှိဟု ဆို
oungmarine11@outlook.com 05/10/2020	1 Comment
ယခုအခါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ကော့ခ်ဘဇားတွင် ယာယီခိုလှုံနေရသည့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာ ဟုဖော်ပြ ) တို့မှာ အရေအတွက် ၁.၁ သန်းခန့်ရှိသည်။ အတင်းအဓမ္မမောင်းထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူတို့၏ နေရပ်ပြန်ခြင်း စတင်စေရေး၌ မြန်မာနိုင်ငံအား ဆွဲဆောင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တက်ကြွသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရေးအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က တောင်းဆိုလိုက်သည်ဟု Dhaka Tribune က ယမန်နေ့ ရေးသားသည်။
နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခြင်း ၄၅-နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခန်းအနားတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အေကေ အဗ္ဗဒူမိုမန်က တရုတ်နိုင်ငံအား ယခုကဲ့သို့ တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနအဆိုအရ သိရှိရသည်။
နှစ်ပတ်လည် အခန်းအနား အထိန်းအမှတ်အဖြစ် သမ္မတ မိုဟာမက်အဗ္ဗဒူဟာမစ်နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာစီနာတို့ကလည်း တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် လီခယ်ကျင်းတို့ထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း နှုတ်ခွန်းဆက် သဝဏ်လွှာများ ပေးပို့ကြသည်ဆို၏။
သမ္မတ ဟာမစ်ကမူ ဖော်ရွေသော တရုတ်ပြည်သူများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် သာယာဝပြောမှုများ ဆက်လက်တိုးပွားပါစေလိုကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပြီး၊ အနာဂါတ်ကာလတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြားရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပိုမိုခိုင်မာလာမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်က ပြန်လည်ရေးသားရာ၌ နှစ်နိုင်ငံတို့သည် တန်းတူညီမျှမှုအခြေခံဖြင့် အပြန်အလှန် လေးစားစွာ အစဉ်အမြဲ ဆက်ဆံခဲ့ကြကြောင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ယုံကြည်မှု ခိုင်မာစေရန်နှင့် အကျိုးရှိသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် နက်ရှိုင်းစွာ ဆက်လက်တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေခြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ် ပူးပေါင်းမှုကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ မြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိ ကြောင်း ရေးသားထားသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာစီနာကလည်း တရုတ်နိုင်ငံအား ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အရေးပါဆုံး မိတ်ဖက်အဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အဆင့်သို့ မြှင့်တင်ရေး နည်းလမ်းရှာဖွေနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကပ်ကျရောက်လျှက်ရှိစဉ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကူအညီပေးမှုနှင့် ပုူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အလေးအနက် တန်ဖိုးထားပါကြောင်း သဝဏ်လွှာ ရေးသားပေးပို့သည် သတင်း၌ ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။
((( Dhaka Tribune., October 4th, 202,” Bangladesh asks China for proactive roles to persuade Myanmar to begin Rohingya repatriation. By: Humayun Kabir Bhuiyan. “ ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
One Reply to “ဒုက္ခသည်များနေရန်ပြန်ခြင်း မြန်မာစတင်ရေး တရုတ်က တက်ကြွသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်းဆို။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ မဟာဗျူဟာ မြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ် ပူးပေါင်းမှု အမြင့်ဆုံး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် တရုတ်ဆန္ဒရှိဟု ဆို”
06/10/2020 at 2:07 AM
20131 amateur sarah gregory opens her hairy pussy http://capital-market-investment.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=michelejullian.info/nude/19974-suspended-inverted-whipped-slave-femdom-media.php
23500 wet rosy pussy http://m.frasermassage.com/analytics/hit.php?nocache=1486235506.1101&r=cutepix.info%2fsex%2friley-reyes.php&a=9&i=3289595&r2=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2famateur%2f22660-amateur-siren-vii-iv-jeff-tee.php
14507 skyla novea sex facial anal red http://www.gclubcasino-thai.com/redirect.php?link=https://michelejullian.info/milf/11784-sexy-glamurous-milf-with-long-hot-red-fingernails-masturbate.php
6878 big tits doggystyle milf outdoor mia khalifa http://extrim2000.mirtesen.ru/url?e=simple_click&blog_post_id=43852529604&url=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fblonde%2f6792-blonde-teen-shagging-in-bath.php
20688 incredible tranny cock wants you to play with it mariana cordoba http://lemonplus146.cheomplus.kr/filter/clickDetecter.jsp?campaignID=7653&duplicationYN=N&targetIndex=28088&encoding=yes&maillink=false&email=ljw1026%40hanmail.net&url=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fpussy%2f10231-really-petite-teen-caprice-strips-and-plays-with-rnmassive-green-dildo.php&linkID=23377&type=click
13815 teen hottie ashlee xposed spreading her legs http://afullcup.com/forums/redirect-to/?redirect=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fanal%2f16877-sex-payoff-vintage-magazine.php
4665 rent joanna angel anal training camp empi http://kcneloyz646nkeiawubwb50xianla7.techdaha.ru/r?url=https://michelejullian.info/pussy/11425-blonde-teens-pound-pussies-in-strapon-romp-pichunter.php
12186 busty australian angela white anal squirt facial http://www.amateurwebcamz.com/cgi-bin/autorank/out.cgi?id=wifebree&url=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fbrunette%2f14023-natalie-mars-is-having-sex-with-hot-brunette.php
23490 mandy kay me play with my toys http://sheltlandsheepdog.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=michelejullian.info/milf/4884-bam-blonde-anal-milfs-evil-angel.php
20165 nasty teen cockriding https://blog.worthing-coaches.co.uk/NavigationMenu/SwitchView?Mobile=False&ReturnUrl=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fpussy%2f24146-alluring-blonde-teen-babe-with-small-tits-spreading-her-legs.php
24988 hanna sapphic erotica https://strasti.mirtesen.ru/url?e=simple_click&blog_post_id=43334880481&url=https://michelejullian.info/blonde/10513-sasha-blonde-spreading-her-legs-for-you-coed-che.php
6954 natasha white dildo saddle girls http://www.ucwawa.net/go.php?url=michelejullian.info/hairy/1020-cute-pale-skin-amateur-teen-toying-pink-pussy.php
21901 amateur spread wide legs up facing the camera definit http://www.dddvids.com/rt/engine/thumb.php?l=tmx5x290x95984&c=1&od=1&s=50&u=https://michelejullian.info/hardcore/18534-abby-lee-brazil-complete-size-set.php
4873 teen ginger maxx fucking pov http://art3point0.com/shop/bannerhit.php?bn_id=3&url=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fhairy%2f10769-huge-melons-and-hairy-pussy.php
5813 dizzy drive audrey hollander january instag http://www.coginta.org/fr/change?redirect=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2flove%2f23852-lacie-girls-erotic-bravo-nude.php
23180 big ass brunette teen liza rowe gives nice blowjob thick dick before fuck http://www.oceantransportservices.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=michelejullian.info/pussy/15751-sexy-blonde-jenna-ivory-face-fucked-and-pussy-drilled-by-hot.php
23242 betty style takes it in the ass red shorts com https://ww3.french-bookys.com/sendToLink.php?link=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2fanal%2f23251-sexy-anny-aurora-wordt-geneukt-op-de-castingbank.php
7845 dani daniels gets nice and wet in the shower desire https://imagesfestival-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1AV38eZL5NPQBF56Fy6gEWHJ9n4evxcrdlfqjjjWte8k-0&key=YAMMID-97259795&link=https%3a%2f%2fmichelejullian.info%2flesbian%2f7077-tori-black-gets-greedy-and-horny-with-celeste-star.php
4374 busty blonde gal pinky june http://ww17.singleagain-formen.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=michelejullian.info/love/20441-karissa-model-erotica.php
2262 super hot plumper girl tiffany http://f-clicado.mesaprodutora.com.br/client/view/?t=tk&eid=19515&email=carlosfranco@revistapublicitta.com.br&url=https://michelejullian.info/anal/14155-pornoacademie-college-teen-slut-sophia-laure-harcore-anal.php
Previous Previous post: ကော့ခ်ဘဇား ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း အာဏာလုပွဲ ပဋိပက္ခ၌ ၂-ဦး သေဆုံးပြီး ၁၀-ဦး ဒါဏ်ရာရရှိ။ မကြာသေးမီကလည်း အလားတူဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၅-ဦး ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့။
Next Next post: နိုင်ငံတကာ ပတ်စ်ပို့များတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှာ ပါဝါအနည်းဆုံးတွင် အဆင့် ၉ သို့ ရောက်ရှိနေပြီး နယူးဇီလန်မှာ ကမ္ဘာ့ပါဝါအကြီးဆုံး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်၊ ဗီဇာမလိုပဲ ခရီးသွားနိုင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံ၏ ကူးစက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အညွှန်းကိန်းဖြစ်လာ